रक्सीको लत छुटाउन सुधारकेन्द्र भर्ना भएको ३ दिनमै मृत्यु - Onlinekhabarhub.com
रक्सीको लत छुटाउन सुधारकेन्द्र भर्ना भएको ३ दिनमै मृत्यु
शुक्रबार २६ कार्तिक २०७८ १७:३०:५३ बजे
काठमाडौं । मान्छे सुधार तथा पुनःस्थापना केन्द्र किन जान्छ ? त्यसको सोझो उत्तर हो–सुध्रिन वा तंग्रिन । तर, होइन यो उत्तर गलत पनि हुनसक्छ । काठमाडौंमा सञ्चालित केही सुधार तथा पुनःस्थापना केन्न्द्रले मान्छेको ज्यानसम्म लिन सक्छन् । वुधबार त्यस्तै घटना भयो, काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा । वे टु लिभिङ ड्रग्स एण्ड रिह्याविलिटेशन सेन्टर पासिकोटमा गएको सोमबार साँझ तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका –३ का टुकराज श्रेष्ठ (मनोज) रक्सीको लतबाट छुट्कारा पाउन भन्दै भर्ना भए । २५ वर्षीय उनको त्यो भर्नाले जीवनमै पूर्णविराम लगाइदियो ।
अघिल्लो दिन भाइटीका लगाएर भोलिपल्टै रिह्याव सेन्टर आएका उनको अभिलाषा थियो, जीवनको स्वर्णिम सुरुवात गरौँ । कोही–कोही जति करकाप गर्दा पनि सुधारकेन्द्र जान मान्दैनन् । निकै हम्मे पर्छ त्यहाँसम्म ल्याउन । तर, उनी आफैँ राजी भएर रिह्याव सेन्टर आए ।
१२–१५ वर्ष सुधारका क्षेत्रमा विताइसकेको वे टु लिभिङले मनोजका अभिभावकलाई खुब फकायो । पूर्ण रुपमा सुधार हुने विश्वास दिलायो । र, उसैको भरोसा छोडिए, मनोज । हाँसीखुसी वे टु लिभिङ छिरेका मनोजको पर्सिपल्टै मृत्युको खबर आउला भन्ने के थाहा अभिभावकलाई ? तर, भयो त्यस्तै । नेपालमा रोजगार छैन भन्दै मनोज जस्तै युवाहरु खाडी हानिन्छन् । तर, गलत नसा बस्यो भने नेपालमै रोजगार भएकाहरुको पनि अल्पायुमै मृत्यु हुन्छ भन्ने उदाहरण बने, मनोज । उनी सेनाका जागिरे थिए । रक्सीकै लतले उनले ४–५ वर्ष भन्दा धेरै सेनाको जागिर खान सकेनन् । र, बेस्सरी रक्सी खान थालेको जम्मा २ वर्ष नहुँदै उनको प्राण गयो । मनोजको मृत्युले परिवारमा शोक मात्रै छैन, ४ वर्षको छोरा र श्रीमतीको विचल्ली भएको छ ।
रिह्याव सेन्टरले १२–१५ वर्षको अवधिमा यस्तो घटना पहिलो पल्ट भयो भन्छ । डाक्टरले दिएको डेथ सर्टिफिकेटमा हार्टअट्याकले मृत्यु भएको भन्नेछ । पोर्टमार्टमको प्रारम्भिक रिपोर्टले पनि मृत्यु प्राकृतिक भन्यो । तर, मृतकका परिवारको मन त्यतिले के थाम्थ्यो । मृतकका परिवारले रिह्याव सेन्टरको लापर्वाहीले मनोजको ज्यान गएको भनेका छन् । यसबारे प्रहरीमा उजुरी समेत परिसकेको छ । रिह्याव सेन्टरका सञ्चालक प्रशान्त शर्मा डाक्टरको रिपोर्टलाई प्रमुख मान्नुपर्ने भन्दै पन्छिन खोजे । त्यहाँ काम गर्ने अन्य प्रतिनिधिले झन् ठूलै गफ हाने । काम गरिरहेका मध्ये एक मनोचिकित्सकले आफुहरुकहाँ मेडिकलदेखि मनोचिकित्सकहरु दक्ष र प्रतिष्ठित रहेको बताए ।
तपाईलाई हाम्रो सिफारिस : महिला आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीलाई नैतिक संकट, ओलीको समेत नाक काटिने खतरा
उनैले भनेका छन्, ‘सिजर अट्याक पछि मनोजलाई ह्यालुसिनेट भयो । वुधबार राती ८ बजे अर्का एक जनाको जन्मदिनमा सरिक भएका उनको करिब राती पौने २ बजे मृत्यु हुनगयो । बुढानीलकण्ठको पासिकोटबाट चक्रपथको मेट्रो अस्पताल ल्याउँदा झण्डै १ः५० भएको थियो । त्यसको ५–१० मिनेटपछि डाक्टरले मृत घोषित गरे ।’ यसको अर्थ मनोजको रिह्याव सेन्टरमै मृत्यु भइसकेको हुनुपर्छ । जतिबेला उनी चलमल गर्न छोडे । सिजर अट्याक हुँदा उनी निकै छट्पट्टीए । त्यसपछि केही शान्त भएका उनलाई फेरि ह्यालुसिनेट भयो । उनी बर्बराउने, हिँड्ने र जताततै ठोक्किने भए पछि त्यहाँका प्रतिनिधिहरुले उनलाई बाँधे । बाँधेका कारण उनको शरीरमा निलडाम पनि थियो । त्यसरी बाँधेर राखेका उनी जब चलमल गर्न छोडे अनि मात्रै अस्पताल दौडाइयो । अस्पताल पुग्नासाथ डाक्टरले मृत घोषणा गरे ।
रिह्याव सेन्टर सञ्चालकले कति सजिलै भनिदिए, यो नेचुरल डेथ हो–आफन्तले पैसाको बार्गेनिङ गर्न मिडिया र प्रहरी उचाले । उनलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्ने हो, १२–१५ वर्ष संस्था चलाए भन्दैमा अहिले पनि त्यसैको ब्याज खान पाइँदैन भनेर । जिम्मा लिइसकेपछि त्यसलाई राम्ररी निभाउन सक्नु पर्छ । सञ्चालकले ६ महिनाको ३ लाख ३४ हजार शुल्क लिँदै थिए । मनोजको परिवारले झण्डै २ लाख जम्मा गरिसकेको थियो । परिवारले आफुले दिएको पैसा फिर्ता लिने कुरा त अघि बढाएका छैनन् भने सञ्चालक शर्माले ठाडै झुठ बोलेर पैसाको बार्गेनिङ गरेको भनिदिए ।
अर्को सफेद झुठ त के बोले भने उनको रिह्याव सेन्टरमा आवद्ध मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. अम्बिका श्रेष्ठ चिरायु अस्पताल र ग्राण्डीमा काम गर्नु हुन्छ, भनेर । डा. अम्बिकाको सल्लाहमा मनोजलाई सिजर र ह्यालुसिनेटको औषधि दिएको भन्ने थाहा पाएकै कारण हामीले उनीसँग केही कुरा बुझ्न खोजेका थियौँ । तर, सञ्चालक शर्माले गलत म्यासेज दिए । डा. अम्बिका मेडिकियरमा काम गर्छिन् भन्ने हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो । यस्तै झुठले हो, अस्पताल तथा यस्ता सेवामुलुक संस्थामा तोडफोड र आगजनी हुने ।
तपाईलाई हाम्रो सिफारिस : ज्येष्ठ नागरिक ग्रामको नाममा ब्रह्मलुट, यसका सुत्रधारलाई उल्टै महिला आयोगको अध्यक्ष उपहार
बुझ्दै जाँदा डा. अम्बिकाले आफैँ मनोजलाई सिजर र ह्यालुसिनेटको औषधि दिएकी हैनन् , टेलिफोनमा कुरा भएको आधारमा औषधि दिएको कुरा थाहा हुन आयो । जो मनोचिकित्सकले मेरै हातमा वान्ता गरेका थिए मनोजले भनेर भने उनले समेत औषधि के दिइयो भनेर भन्न मानेनन् । तर, अन्य रिह्याव सेन्टरमा बुझ्दा अल्कोहलिकलाई सिजर र ह्यालुसिनेट हुनु सामान्य हो । त्यसैका कारण हार्टअट्याक आएर मान्छेको मृत्यु हुने कुरासँग पनि सहमत छैनन्, यसका जानकारहरु । ति जानकारका अनुसार जम्मा एउटा ट्याब्लेट (लागुऔषध भनेर चिनिएकाले यहाँनेर औषधिको नाम गोप्य राखिएको छ) दिएको भए पनि यो अवस्थै आउँदैन थ्याे र यो शतप्रतिशत लापर्वाही हो । मनोजको दाहसंस्कार पनि भइसक्यो । तर, रिह्याव सेन्टर सञ्चालक तपाइँले मिडियाबाजी गरे हामी पनि आफ्नो तरिकाले अघि बढ्छौँ भनेर मृतकका आफन्तलाई धम्की दिइरहेका छन् । गल्ती भएको छैन भने सत्य बोल्नु र गल्ती नै भएको भए पनि सत्य बोलेर माफी माग्नु उचित हुन्छ । नभए, १२–१५ वर्ष रिह्याव सेन्टर चलाएको धाक लगाएर त्यसैको ब्याज खाँदै मान्छे मार्ने छुट तपाइँलाई छैन है, सञ्चालक ज्यू । कांग्रेसले बीपी र गणेशमाान, एमालेले मदन, मनमोहनको नाम बेचेर ब्याज खाए जस्तो होइन यो । मान्छेको जीवनको सवाल हो, चेतना भया ।
तपाईलाई हाम्रो सिफारिस : डलरवादीहरु खबरदार ! पस्लाऊ न्यायालयभित्र
प्रकाशित मिति: शुक्रबार २६ कार्तिक २०७८ १७:३०:५३ बजे